Karatra fandraharahana tany am-boalohany | Famoronana an-tserasera
Iza no nilaza fa tsy eo intsony ireo kara-pandraharahana? Marina fa any Espana ny fanomezana karatra fandraharahana dia zavatra hafahafa, ary imbetsaka izany dia misambotra anao nefa tsy fantatrao izay holazainao na ahoana no tokony hihetsika amin'izao fotoana izao. Fa any amin'ny toerana hafa dia lasa protokolota io. Ohatra, any Japon, rehefa omena karatra ianao dia mila mametraka fanontaniana momba ny fampahalalana momba azy. Raha tsy izany dia heverina ho fihetsika tsy matsiro.
Ankehitriny, misy fomba maro hanamboarana karatra fandraharahana; Ary indraindray ny fahitana ny endriny tonga lafatra dia mitaky fotoana. Fa ny valiny farany dia mendrika izany. Noho izany, eto ambany izahay te hanome anao hevitra vitsivitsy hanaovana karatra am-boalohany orinasa.
1 Maninona no miloka amin'ny karatra am-boalohany
2 Hevitra hamoronana karatra fandraharahana tany am-boalohany
2.1 Karatra fandraharahana tany am-boalohany sy maty
2.2 Karatra misy boaty pensilihazo
2.3 Karatra fandraharahana 3D
2.4 Karatra fandraharahana tany am-boalohany - manova endrika
3 Ohatra amin'ny karatra fandraharahana mamorona
3.1 Karatra fisaraham-panambadiana mampihomehy
3.2 Karatra ho an'ny matihanina Yoga
3.3 Mety ho an'ny mpitsabo nify
Maninona no miloka amin'ny karatra am-boalohany
Eritrereto vetivety ny mety ho fihetsikao raha misy manome anao karatra ara-barotra mahazatra, miaraka amin'ny anarana, adiresy ary nomeraon-telefaona. Horaisinao izany, hitady ianao segondra vitsy ary dia izay. Tsy hanao ny asany izany raha tsy tena ilainao izany, marina?
Ankehitriny, alaivo an-tsaina hoe omena anao karatra misy endrika mahafinaritra izy ireo, ohatra hoe mitsangana ny anaran'ny orinasa, na izy io koa no taratasy voalohany isaky ny angon-drakitra fampahalalana izay te-hiditra ao amin'ilay karatra. Inona no hisarika ny sainao ary hojerenao izany?
Ka izany no antony mahatonga ny karatra orinasa voalohany ho tsara lavitra noho ny mahazatra; SATRIA hisarika ny sain'ny olona omenao ianao, fa amin'ny fampahatsiahivana azy ireo momba an'io karatra io dia azonao atao koa ny mampiresaka azy ireo anao, asehoy ny karatrao; Ary minoa azy na tsia, ny fahatsiarovana sary ananan'ny olona maro dia hampahatsiahy azy ireo hoe nanao ahoana ny karatra tadiavinao raha toa ka mila ny serivisinao izy ireo. Saingy, ho an'ity dia mila mamorona karatra fandraharahana tsara ianao izay mifanaraka amin'ny orinasanao sy ny orinasanao. Hainao ny manao azy?
Hevitra hamoronana karatra fandraharahana tany am-boalohany
Fantatsika fa mandany vola antsika indraindray ny fahaiza-mamorona sy ny maha-izy azy, dia misy hevitra sy lakile vitsivitsy azonao ampiharina rehefa mamorona karatra orinasanao voalohany. Tsy midika hoe mampiasa azy ianao, ny zava-drehetra, fa midika kosa izany fa jerena ireo fahafaha-manao tsy maintsy atao, na izany aza, miala amin'ny fanaovan-draharaha toy ny mahazatra.
Karatra fandraharahana tany am-boalohany sy maty
Amin'izao fotoana izao dia alaina ny karatra fandraharahana maty, izany hoe mizara na apetraka amin'ny fomba samy hafa. Ohatra, iray izay nanapahan'izy ireo ny silhouette anao, na ilay an'ny logo'ny orinasanao, hampiasa azy io ho haingon-trano (raha tian'izy ireo izany, mazava ho azy). Azonao atao, ohatra, Diniho ny fanaovana azy amin'ny tobim-pitsaboana iray, izay biby ny silhouette.
Safidy iray hafa ny fanomezana ilay karatra ho toy ny piozila kely, nesorina, mba handany segondra vitsivitsy izy ireo hamoronana izany ary hahafahan'izy ireo mahazo ilay vaovao. Amin'izay ianao dia manao zavatra mahafinaritra kokoa.
Karatra misy boaty pensilihazo
Azonao an-tsaina ve ny karatra nisy tranga? Eny, izany no atolotray anao. Ny fametrahana ny karatra ao anatiny sy ny fanaovana fonosana hitazonana azy dia mandeha araka ny raharaham-barotrao ny zava-drehetra.
Ohatra, raha manana magazay firaketana ianao, maninona raha tsy karatra toa rakitra an-tsoratra izay alainao amin'ny vinyl hametrahana ny latabatra fihodinana? Original dia.
Safidy hafa izany apetraho amin'ny fomba toy izany ny karatra, miaraka amin'ny tanany, mampiseho sary izy io, ary rehefa esorinao dia miova ny sary.
Karatra fandraharahana 3D
Mihoatra noho ny amin'ny 3D, izy ireo dia manana singa sasany izay azo kitihina, manana endrika ary mifanaraka amin'ny orinasao izany. Ohatra, raha manana lamba firakotra sy lamba firakotra ianao, dia azonao atao ny manamboatra padding malefaka toy ny lamba volon'ondry na karipetra matevina.
Karatra fandraharahana tany am-boalohany - manova endrika
Aza mijanona afa-tsy amin'ny efa-joro (mitsivalana na mitsangana), miloka ankehitriny amin'ny fanovana. Manandrama karatra toradroa, boribory, miendrika diamondra na izay azonao eritreretina. Azonao atao koa ny mandika ny endrik'ilay zavatra mampiavaka ny orinasanao (ohatra, raha manana grenady ianao dia misafidiana voankazo iray tazomina mandavantaona).
Amin'ny ankapobeny, ny lakilen'ny fananganana karatra orizinaly ankehitriny dia:
Mampiasà endrika mamorona na silhouette.
Mampiasà sary tena solontena sy misy kalitao izay manintona ny saina.
Alefaso an-tsoratra ny kely indrindra, ny angona ilaina indrindra ihany.
Mifandray na miaraka amin'ny zava-misy mitombo (izy ireo no ho avy, ka tadidio izany).
Chords miaraka amin'ny orinasanao (miloko, mifandraika amin'ny asa ataonao, sns.).
Ohatra amin'ny karatra fandraharahana mamorona
Alohan'ny hamaranana dia te-handao anao izahay ohatra amin'ny karatra orinasa voalohany izany, noho ny fomba namoronana azy ireo, dia manintona ny saina. Tsy milaza aminao izahay handika azy ireo, satria tsy ho "original" intsony izy ireo avy eo. Saingy afaka manome anao hevitra vaovao hahombiazanao izy ireo.
Karatra fisaraham-panambadiana mampihomehy
Rehefa te hisaraka ny mpivady dia manantona mpisolovava, sa tsy izany? Ity karatra noforonin'i James AW Mahon ity dia ny manome karatra azo zahana roa, toy ny atao amin'ny fisaraham-panambadiana, izay mampisaraka ny olona roa.
Hitanay izao ny lesoka Vaky ihany koa ny anarany, raha tsy ny telefaona sy ny mailaka nomeny. Ka tadidio ao an-tsaina raha hanao famolavolana toa izao ianao ka samy ho eo ilay anarany.
Karatra ho an'ny matihanina Yoga
Loharano: Beat Tic
Inona no tena mampiavaka ny fanaovana yoga? Manana tsihy, sa tsy izany? Alao an-tsaina ange ny fanaovana a karatra fandraharahana omenao ary toy ny tsihy tena izy, amin'ny miniature ihany.
Izany indrindra no nataon'izy ireo tao amin'ny orinasa yoga any Vancouver. Ary tsy hiteny ianao hoe tsy mamorona izany.
Mety ho an'ny mpitsabo nify
Loharano: Tic Beat
Ny mpitsabo nify dia manasitrana antsika amin'ny lavaka (ankoatry ny zavatra hafa). Ka ny fananana karatra mampiseho nify misy lavaka dia tsy hevitra ratsy. Fa tsy dia mamorona. Ahoana anefa raha ao anaty ny karatra fandraharahana ary rehefa misintona azy ianao dia manjavona ny lavaka? Miova ny zavatra.
Izany no Dr. Anita, izay namorona endrika iray izay ampahan'ny ampahany amin'ny sarin'ny telefaona mampiseho faharavana manjavona.
Betsaka ny safidy ho an'ny karatra fandraharahana tany am-boalohany, fa ny zava-dehibe dia ny fandrakofany ny zavatra ataonao sy ny fifandraisan'ny olona amin'ny orinasanao. Raha vantany vao azonao ilay izy dia mila milalao azy fotsiny ianao (ary mitady orinasan'ny fanontana afaka manatanteraka azy).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Karatra fandraharahana tany am-boalohany
Ohatrinona ny haben'ny taratasim-barotra?